Jurassic World slot Nitondra indray ny sasany ny toerana tena dinosaurs mba hanampy ny sasany traikefa mampientam-po eo amin'ny fiainanao. Ity Tontolo Jurassic slot no namorona ny ankapobeny Microgaming ary aingam-panahy avy amin'ny sarimihetsika Jurassic Park be fitiavana. Tsy lazaina intsony ny, izany ihany koa ny manome tombony ny sasany mahafinaritra lafin-javatra izay dia aoka ianao handresy betsaka araka izay maniry.
Tariho ny dinosaurs in Jurassic World slot
Ity Tontolo Jurassic slot Manasongadina reels dimy niaraka tamin'ny telo andalana sy 243 fomba mba handresy. Reels dia tsara natao tamin'ny fomba futuristic sasany izay atao amin'ny metallics. Ny resahana dia aseho amin'ny alalan'ny valan-javaboary-tahaka ny rafitra, tena complementing ny reels.
Ity Tontolo Jurassic slot koa hilalao ny sasany rakitsary sy ny mozika avy amin'ny sarimihetsika Noho izany manao azy kokoa mahaliana.
Sarobidy marika avo dia aseho ny endri-tsoratra ny sarimihetsika mihitsy i.e. Owen, Simon, Clare, ary Nick. Ny ambany lanja ny marika, etsy ankilany, dia famoriam-bola isan-karazany ny dinosaurs amin'ny loko isan-karazany.
Ny famantarana ny lalao dia ny bibidia famantarana kosa ny moka amin'ny metaly mamirapiratra dia natao ho toy ny mariky aelezo.
Tombontsoa eo ambany ny anaranao
Misy endri-javatra isan-karazany tombony natolotra ity World Jurassic slot. Out izay, first one is Wild scatters. Azo niteraka ka vao roa aelezo fanehoana an'ohatra nandritra ny kofehy ireny ihany. Ho avy eo izy roa lahy hiverina ho toy ny boriki-, Noho izany hanomezako anao ny sasany fanampiny tampon-tanety.
Indominus Rex no endri-javatra manaraka ity slot. Ny zava-manan'aina goavana hiseho tsindraindray amin'ny intervals sasany mandritra ny base lalao. Ho maro ny Fandresena ho amin'ny 1000x.
Raha tanety telo na mihoatra aelezo marika dia izany no nahatonga an'ilay bibidia kofehy ireny endri-javatra maimaim-poana ho anareo. First free spin feature is the Gyrosphere Valley which will award you 10 spins maimaim-poana niaraka tamin'ny hetsiky mitombo tamin'ny zavatra rehetra: tsy nahazo kofehy ireny. Ho hamarana rehefa hahazo ny fandresena. Ny endri-javatra faharoa dia ny Famoronana Lab. Ho mari-pankasitrahana anao 10 spins maimaim-poana ary ny sasany mandresy marika. Marika ireo ho nanjavona tao elaela mba afaka mamorona bebe kokoa Fandresena. Ny endri-javatra farany dia ny Raptor Den izay manome anao 10 spins maimaim-poana sy ny aelezo ny fanehoana an'ohatra izay asa tahaka ny fivoaky ny.
Ity izao tontolo izao Jurassic slot dia feno hetsika miaraka amin'ny rivo-piainana mahaliana iray izay ahafahanao manana fotoana be mahafinaritra. Milalao intsony izany ho teny, mamela anao hifidy ny tombontsoa kofehy ireny maimaim-poana. Moa ny toerana mahazo mankaleo? Ary ahoana ny niantso dinosaurs sasany hariva ity?
Casino Free Online Bonus No petra-bola | Get £5 + $€ £ 225
Free slot Games ao amin'ny Best Casino Sites akaikinao £ 5 Ankehitriny!